Tobonaan ku dhimatay qarax ka dhacay dalka Suuriya - BBC News Somali
Tobonaan ku dhimatay qarax ka dhacay dalka Suuriya
Dad sugaya in la daad gureeyo
Qarax weyn oo loo adeegsadey walxaha qarxa oo la soo saaray baabuur ayaa lala beegsadey kolonyo basas ah oo ay sugayeen kumanaan qof oo laga daad gureyn rabey laba degmo oo ka baxsan magaalada xalab oo ay ciidamada dowladu go'doomiyeen in muddo ah.
Muuq baahiyaha dowlada ayaa sheegay in ugu yaraan 39 qof ay ku dhimatey weerarkan qaraxa ah, waxaa la baahiyey muuqaalo dad meyd ah oo ay caruuri ku jirto oo yaala basaska gubanayay agtooda. Dadkan ayaa badankoodu waxaa ay ka yimaadeen degmooyinka Fuaa iyo Kefraya oo ku yaalla gobolka idlib ee ay maleeyshiyaaadku maamulaan.
Halka ay wax ka dhaceen
Daad gureyntan ayaa billaabatay maalintii Jimcihii, waxaana lagu bedeli rabey in loo ogolaado maleeyshiyaadka iyo qoysaskooda Suniyiinta ah in ay ka baxaan magaalooyin u dhow caasimada Dimishiq oo ay dowladu go'doomisay.
Dad rayid ah oo saaran bas
Rai'sul wasaare Rooble oo ka jawaabay qoraalkii ka soo baxay madaxwayne Farmaajo
Wiilka ugu yar carruurta Cusama Bin Laden muxuu ka yiri 'jihaadka' uu aabbihii ku jiray?
Ninka reer Mareykanka ah ee magangalyada ka helay gurigii Cusama Bin Laden